Okwu Megidere ndi bi na FCT: Ndi PDP agwa Buhari ka ọ rịọ mgbaghara | odumblog
Okwu Megidere ndi bi na FCT: Ndi PDP agwa Buhari ka ọ rịọ mgbaghara
posted on Jun. 19, 2019 at 7:53 pm
Ndi Peoples Democratic Party (PDP) agwala Onyeisiala Muhammadu Buhari ka ọ rịọ ndi bi na isi ala Naijiria (FCT) maka ịkpọ ha ndi ọjọọ n’ihi na ha tụnyeere ya na ntuliaka onyeisi ala e mere na Febuari, 2019.
Buhari kwuru nke a na Tuzdee mgbe ọ nabatara ndi nzukọ si FCT. O ji njakịrị wee kpọọ ha aha ọjọọ a. O kwukwara na n’agbanyeghi na ha tụnyeere ya, na ọ ga-agbalị mee ka nchekwa dị n’ebe obibi ha.
Ndi PDP site n’ọnụ Kola Ologbondiyan bụ onye ode akwụkwọ maka ọha obodo nke ndi PDP kwuru na ụdị okwu a ekwesighi isi n’ọnụ onyeisi ala pụta. Ha kwukwara na ọ bụghị naanị na FCT ka ajụrụ ya. Ọtụtụ steeti n’obodo a tụnyere PDP mana ndi Independent National Electoral Commision (INEC) gbara ha mgba okpuru. Nke a ka ha kwuru na ha na-agbali iweghachi ọchịchị ruru ha.
Ndi PDP gara n’ihu katọọ okwu Buhari kwuru gbasara ichekwa FCT maka ọdịmma ya na onye na-eso ya bu Okz. Yemi Osinbajo. Ndi PDP kwuru na ọ bụ ọrụ onyeisiala ichekwa akụkụ obodo niile na-abughi naani ebe metụtara ya na onye na-eso ya.
Zamfara emefuola Nde naira iri asatọ na atọ maka ehi eji mee Sallah